Abafana namantombazane bayajabula kakhulu lapho abazali basuke bebonisa ukuthi ukunakwa uphinde uhlele ngabo yinto emnandi ababengayilindele. Riddle mayelana endlini kungaba indlela enhle yokuqala fun and umcimbi incendiary. Ukuze wenze lokhu, abazali okudingeka ucabange ngazo zombhalo, ukubhala on ephepheni imibuzo efanele futhi unqume ukuthi kuyoba isihloko umcimbi.
Riddle mayelana endlini zingase zihluke, kumelwe uqale kusukela yobudala kanye kwamakhono we ngane, akhululeke amakilasi aphethwe ngendlela umdlalo. Yiqiniso, wonke umzali azi kahle ukuthi amandla ayo okucabanga futhi izithakazelo ngesikhathi indodakazi yabo eyigugu kancane noma indodana. Ngakho-ke, ukuze anqume hlelo ngeke kube nzima, kuphela ukhokha udaba iDemo inkathi ethile yesikhathi.
Kungani puzzle zibaluleke kangaka ngoba ingane
Ukuze ukuthuthukisa umntwana kubaluleke kakhulu ngasiphi yobudala. Riddle mayelana indlu izingane - akusiyo kuphela ithuba ukuze ujoyine umcimbi okumangalisayo futhi kumnandi, kodwa futhi yisisusa ezisemqoka ukuthuthukiswa. Ngenxa imibuzo okunengqondo ingane ingakha zimfanelo kimi:
Lezi zimfanelo zibalulekile kakhulu ekukhuleni efanele kanye nokuthuthukisa abafana namantombazane amancane benza. Ngakho-ke, imfihlakalo mayelana indlu izingane kufanele ibe nenjongo futhi uchungechunge okunengqondo, edabula lapho ingane izokwazi ukuthola impendulo futhi amemezela kona.
Indlela yokwenza iholide wangempela amakilasi zentuthuko
Yiqiniso, indodana nendodakazi kuyoba mnandi kakhulu ukubamba iqhaza uma kwenzeka, okuhlelwe ngendlela umdlalo. umbuzo banal efuna impendulo kungase kubonakale izingane awayiphazamisi futhi ungakujabulisi. Kule ndaba, kubalulekile ukuba sicabangele ngokuningiliziwe ngentuthuko uhlelo umdlalo senzeka umoya ofanayo lapho indodana noma indodakazi kuyoba protagonists.
Uma kwenziwa umdlalo ubuhanjelwe izingane eziningana, ungakwazi ukuhlela baton. Ukuze ingane eyodwa kufanele ucabange lomcimbi njengendlela umncintiswano lapho ukunqoba lapho uzothola umklomelo. Kunoma yikuphi, abazali kufanele iso khanya, nezwi lamazwi akhe kumelwe nakanjani uzwakale ugqozi nentshisekelo ekambisweni. Khona-ke imfumbe yezingane mayelana endlini uzobe lula ukuqagela. Qiniseka ukucabanga mayelana nohlelo.
izimfihlakalo ethakazelisayo endlini nge izimpendulo
Puzzle kungaba nhlobonhlobo. Kufanele sicabangele lokho okuyokwenzeka imisebenzi ukuthuthukiswa. Qaphela, ungakwazi ukuthatha imibono elandelayo:
Ngo Amafasitela alo ayizinkulungwane nezicabha okukulo,
Kuyinto eziphilayo omkhulu ... (House)
Phansi kwalo awubalwa,
Kukhona zokuhlala eziningi lapho,
Abantu bahlala lapha endaweni engamamitha ezahlukene,
Ekuseni, shiya ke futhi ngisebenze.
Isayithi wokwakha omkhulu,
Ngokushesha ukuba yakhiwe abantu abazophila kulo,
Nokho, yebo, iphi indlu.
Kuyo kunabantu abaningi,
Kuyini lokhu? Phendula ngokushesha.
Ingabe isitini, kuyinto prefabricated,
White, ompunga ngokuluhlaza, ngisho oluhlaza.
It has a lot of ezindlini kanye amafasitela ungabali.
Abakhi oyakhayo amabhlogo komunye nomunye wabantu,
Lokho ukwakha laba bantu? Mhlawumbe othile owaziyo?
Uvula umnyango, inkinobho ikheshi ucindezela,
Amakamelo okulala awabange lapha kakhulu, kodwa uzothola wakhe.
Wonke umuntu, yebo, kwaziwa kahle nxazonke,
Yini sikhuluma ... (indlu).
Lokhu imfihlakalo ngegama elithi "ekhaya" kungenziwa Kulindeleke by izingane zabo bonke ubudala. Ngakho-ke, singaba zihlanganisa ohlelweni, imisebenzi enjalo ngokuphepha.
Nezimfumbe mayelana endlini for abancane
Izingane abasabambelele imvuthu ngempela kufanele ubuze imibuzo ingane enjalo ukuze uthole kalula izimpendulo kubo. Riddle mayelana endlini for nabancane kungaba kanje:
Futhi umngane wakho, Dima,
Ngisho kuSasha Marinka.
Amafasitela ungabali ogangeni.
Kuyini kulesi simangaliso?
Ngiphendule, ube ngumngane.
Yeka giant emangalisayo nasesakhiweni.
Bricks crane kudamba, nabakhi bawendlala ngokushelela.
Huge esibhakabhakeni, efuna,
High njengoba inyoni zezulu.
Amehlo akhe - amafasitela,
Isicabha - efana umlomo,
Kuyo, ngamunye wethu uhlala.
Noma yimuphi imfihlakalo mayelana endlini uzobe kalula Kulindeleke by ngisho izingane ezincane kunazo. Ngakho-ke kufanele siphawule puzzle ngomntwana omncane sengathi connoisseur sangempela.
Nezimfumbe mayelana ekhaya izingane abasesikoleni
Abafana namantombazane abaneminyaka engama eziyisithupha kungaba nzima ukubuza imibuzo. Phela abafundi babe khathizwe mkhulu kunezinhliziyo izingane abaya enkulisa. Riddle mayelana endlini for abafana namantombazane abasesikoleni kungenziwa yilo kanje:
Lokho okungenhla kuphela crane,
Kukhona amaseli amaningi e-ke,
Hlobo luni isakhiwo,
Ngamunye wabo inenombolo ayo,
Kukhona igama lomgwaqo,
kahle kakhulu nathi nawe,
Lena isitini ubude ... (indlu)
Ngoba indoda kuba indawo yokukhosela enokwethenjelwa,
It has iminyango ikheshi,
Yonke ukuphakama eziningi amawindi,
Ngabo ukuvula emgwaqweni.
izwe elikhulu futhi okusezingeni eliphezulu
Kukuyiphi sebuningini emafulethini.
Kungaba okusezingeni eliphezulu, futhi singase sibe buthakathaka,
Brick, panel, banayo amafasitela nezindonga.
Lezi puzzle uzongithanda ingane. Ngakho-ke kubalulekile ukuba sizibambele akhawunti. Kungase futhi kube imfihlakalo nge izimisele zezibalo. Ngo neketanga enjalo okunomqondo ezifihliwe, hhayi kuphela ngezwi kodwa futhi lesi sibalo. Ngokwesibonelo, imfumbe izindlu mayelana 5:
Babili giant, futhi abathathu igcwaliswe.
Manje ngihlala ekhaya kubo bonke usulungile,
Vele kwenzeka ... (5 amakhaya).
Kulesi nombono, ungenza eziningi izimfihlakalo, ukuze ingane nje kuphela eye yaboniswa yikuphi ukuhlakanipha ngeso lengqondo, kodwa futhi nekhono zezibalo.
Yini zimo imisebenzi zentuthuko ungacabanga
Ukuthuthukisa isifundo kujabulisa futhi kumnandi, kuyafaneleka ukucabangela isimo. Qaphela, ungakwazi ukuthatha imibono elandelayo:
A imvunulo umncintiswano. Ngayinye okungalungile inkomba ingane ezifihlwe ezinye iqhawe lwasemaphusheni. Ukuze wenze lokhu, kudingeka ucabangele pre-amasudi.
Umncintiswano. Lolu khetho ingasetshenziswa uma umdlalo ubuhanjelwe izingane eziningana. Kulokhu, ngoba impendulo ngayinye efanele ukuba izingane imfumbe banikwa candy wrappers. Ekupheleni, ukubala inani izimfanelo eqoqwe futhi winner kuthiwa. Yiqiniso, udinga okuthile okuvuza abahlanganyeli. Ake umklomelo omkhulu kuyoba abalulekile, kanye nalabo kukora chips kancane uzothola isipho esiduduzayo.
Dweba-ka. Kulolu hlelo, ungakwazi ukuhlanganisa imisebenzi okunengqondo ne Iminako yezinto zokudala. Ngesikhathi lo mdlalo, ingane ayidingi lamukele impendulo puzzle, futhi kubalulekile ukuba uyoyikhipha. Ngakho, kungenzeka ukwenza uhlelo ezihlukahlukene futhi ngesikhathi esifanayo ziveza ikhono kwezobuciko e abafana namantombazane.
Vala amehlo akho. Le nguqulo iskripthi iyafana emncintiswaneni odlule. Vele ukudweba impendulo imfumbe kumele amehlo noma uvale emehlo. Lo mbono kumnandi futhi amazing nakanjani baziswa namadodakazi nendodana.
Kanjani ukushukumisa ingane yakho ukubamba iqhaza
Yiqiniso, ukuze iqhaza imidlalo ezithakazelisayo kakhulu uma wazi ukuthi ukulwa ngoba nje, kodwa ukuze bathole umklomelo. Leso yisithembiso kwesipho ekupheleni umdlalo kuyoba isisusa enkulu ukuba kudlule bonke ukuhlolwa kuze kube sekupheleni.
Iyini indima ogwini-ngabahlala isifundo yamazwe osenyakatho? Izincazelo, Pomorie cwaningo
Chenille - Indwangu, yakhelwe induduzo futhi lula
Recipe "Zrazy amazambane" - kuyodingeka ukunambitheka wonke umuntu
Incazelo yegama lamaMaya. Ukuzijwayeza unkulunkulukazi wasentwasahlobo